Golden Retriever Border Collie သည်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသလား။ - Breeds
Golden Retriever Border Collie သည်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသလား။
သင်ဟာ top-tier working breeds နှစ်ခုကိုပေါင်းလိုက်ရင်ဘာရမလဲ။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ဒါဟာရွှေ Retriever Border Collie ရောနှောပါ!
ဒါ့အပြင်ကိုခေါ် Golden Border Retriever၊ Coltriever၊ Gollie နှင့် Golden Border Collie၊ သင်ဤကဲ့သို့သောအဖြစ်အသိဉာဏ်နှင့်အဖြစ်ကျိန်ဆို။ ပူဇော်တစ်စပ်ကိုရှာတွေ့ဖို့ခဲယဉ်းဖိလိမ့်မယ်။
Collie ရွှေ Retrievers သော်လည်း, သူတို့ရဲ့ quriks မပါဘဲမရှိကြပေ။ ကြွင်းသောအရာနှင့်ဤကွဲပြားခြင်းသည်မည်သည့်အရာကိုခွဲခြားသိမြင်သည်ကိုဆက်လက်ဖတ်ရှုပါ။
Golden Border Collies ၏သမိုင်း
Border Collie ရွှေပြန်လည်ရယူသည့်အရောအနှောသည်မည်သည့်အရာနှင့်တူသနည်း။
Golden Retriever Border Collie သည်မိသားစုခွေးများကိုရောနှောပါသလား။
Golden Retriever Border Collie ရောစပ်ခြင်းအားပိုင်ဆိုင်ခြင်း
Golden Retriever Border Collie ရောစပ်မှုတွေဘယ်လောက်ကြာကြာအသက်ရှင်နေထိုင်မှာလဲ။
Golden Retriever Border Collie အရောအနှောကိုဘယ်မှာဝယ်ရမလဲ။
အခြား Border Collie ပေါင်းစည်းခြင်းနှင့် Golden Retriever ရောနှောခြင်းများရှိပါသလား။
စီရင်ချက် - သင် Golden Retriever Border Collie ရောစပ်သင့်သလား။
Border Collie နှင့် Golden Retriever ကိုပထမဆုံးဖြတ်ကျော်ရန်အတွက်အကြွေးယူရန်မည်သည့်မျိုးဆက်များတက်တက်ကြွကြွမရှိခဲ့ပါ၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏မူလအစနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းအချက်အလက်များစွာမရှိပါ။
ဖြစ်ခြင်းနေသော်လည်း အတော်လေးသစ်ကိုစပ် , မျိုးစုံမှတ်ပုံတင်အများအပြား Border Collie ရွှေ Retriever လက်ဝါးကပ်တိုင်အသိအမှတ်ပြုထားသည်။
သူများသည် အမေရိက၏ခွေး Registry (DRA)၊ အမေရိကန်ခွေးတစ်ကောင် Hybrid ကလပ် (ACHC) ဒီဇိုင်နာ Dogs ခွေးဂေဟာကလပ် (DDKC), နိုင်ငံတကာဒီဇိုင်နာ Canine မှတ်ပုံတင် (IDCR) နှင့် ဒီဇိုင်နာမွေးမြူရေးမှတ်ပုံတင် (DBR) ။
Border Collie နှင့် Golden Retriever တို့ကိုသူတို့၏ဒီဇိုင်းခွေးသားစဉ်မြေးဆက်ထံသို့မည်သည့်အရာများကြည့်ရှုနိုင်မည်ကိုကြည့်ရန်အသေးစိတ်ကြည့်ကြပါစို့။
တောက်ပသော Border Collie နှင့်တွေ့ဆုံပါ
၎င်း၏များအတွက်ကြိုဆိုပါတယ် ထူးခြားသောထိန်းကျောင်းနိုင်စွမ်း၊ က Border Collie သိမျးပိုကျနှင့်ရှာဖွေရေးအတွက်အမြစ်များရှိပါတယ်။
နယ်နိမိတ်ကြာမြင့်စွာကတည်းကထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့ကြသည် အများဆုံးအသိဉာဏ်ဖောက် ။ တကယ်တော့, လေ့လာမှုများ သူတို့က5အထပ်ထပ်သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းအတွက်အသစ်တခု command ကိုကျွမ်းကျင်နိုင်ကြောင်းပြသပါ။
ဒီလိုမျိုးဗီဇမျိုးနဲ့ Border Collie ရောနှောခြင်းကခွေး Mensa ထဲကိုပါ ၀ င်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုသင်အလောင်းအစားနိုင်ပါတယ်။
Golden Retriever ကိုလေ့လာပါ
ကျွန်ုပ်တို့အားစကော့တလန်မှ Dudley Marjoribanks ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည် ရွှေ retriever ။
၁၈၀၀ ပြည့်နှစ်အလယ်ပိုင်းတွင် Marjoribanks သည်တစ်ခုတည်ထောင်ရန်ထွက်ခွာခဲ့သည် မုန်းတီးမှု ။ သူကယခု - မျိုးသုဉ်းပေါင်းစပ် Tweed ရေ Spaniel အဝါရောင်နှင့်အတူ Wavy-Coated Retriever ။ အိုငျးရစျ Setter နှင့် သွေးထွက်သံယို မျိုးဗီဇအဖြစ်ကောင်းစွာရောနှောထည့်သွင်းခဲ့ကြသည်။
ဂရုတစိုက်မွေးမြူခြင်းဖြင့်သူနှင့်သူ၏ဆက်ခံသူများသည်နောက်ဆုံးတွင် Golden Retriever ကိုပြီးပြည့်စုံအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့ကြသည်။
Goldens ရေတံခွန်အမဲလိုက်ခြင်းနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်နေဆဲကောင်းစွာကိုက်ညီသော်လည်း, သူတို့သည်လည်းပါပဲ စံပြမိသားစုအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ ။ သူတို့ဟာရေကိုနှစ်သက်တယ်၊ အလုပ်လုပ်ရတာကိုနှစ်သက်ကြပေမဲ့သူတို့ရဲ့အထုပ်ကိုသူတို့အများစုနှစ်သက်ကြတယ်။
hybrids အများစုကဲ့သို့ပင် Golden Border Collie ခွေးပေါက်စများမည်ကဲ့သို့ထွက်ပေါ်လာမည်ကိုခန့်မှန်းရန်ခက်ခဲပြီးများသောအားဖြင့်ယေဘုယျအားဖြင့်ကျရောက်တတ်သည်။
Coltrievers တွင်အချိုးကျသော ဦး ခေါင်းနှင့်အားကစားကျစ်လစ်သောကိုယ်ထည်များရှိသည်။
floppy နားရွက်နှင့်ကျယ်ပြန့် -set ကိုအကြားဗဟိုပြု အညိုရောင်၊ ပယင်းသို့မဟုတ်အပြာရောင်မျက်လုံးများ , ရွှေနယ်စပ် retriever ရဲ့ရှည်လျားသောနှာခေါင်းတစ်ခုကြည်ညိုဘွယ်ကောင်းသောအနက်ရောင်သို့မဟုတ်အညိုရောင်နှာခေါင်းမှကျဉ်းမြောင်း။
ဒါကြောင့်ရွှေနယ်စပ် Collie ရဲ့ကုတ်အင်္ကျီမှကြွလာသောအခါ, အ အရောင်ဖြစ်နိုင်ခြေအဆုံးမဲ့ပုံရသည် ။
ဤကြက်တူရွေး၏အသားမွေးသည်စိတ်ကူး။ ရသောမည်သည့်အရောင်မျိုးမဆိုဖြစ်နိုင်သည်။ အဖြူ၊ အနက်ရောင်၊ အနီရောင်၊ အဝါရောင်၊ ရွှေရောင်၊ အညိုရောင်၊ အညိုရောင်၊ ချောကလက်၊ ။
သငျသညျပေါင်းစပ်သို့မဟုတ်တ ဦး တည်းအစိုင်အခဲအရောင်တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။
သင်၏ Golden Border Retriever တွင်သူတို့၏မျက်နှာ၊ ရင်ဘတ်နှင့်ခြေထောက်တို့တွင်အမှတ်အသားများရှိလိမ့်မည်။
Coltriever ကုတ်အင်္ကျီများလည်းဖွဲ့စည်းပုံကွဲပြားနိုင်သည်။ အချို့သောသားရေများသည်တောက်ပသောလှိုင်းများဖြင့်အစဉ်အဆက်ပိုမိုကြမ်းတမ်းသောသားမွေးများဖြင့်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။
သူတို့ရဲ့မိဘဝတ်ရည် '' အင်္ကျီအရှည်ပေးထားသော, ဆံပင်တိုတောင်းမေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်ပါတယ်။ သင်လုပ်နိုင်သည် အလတ်စားမှရှည်လျားနှစ်ဆအင်္ကျီကိုမျှော်လင့်ထား ဒီ fido ကနေ။
ဒီဗီဒီယိုထဲမှာ Trinny ကိုကြည့်ပါ။ ကြည်နူးဖွယ်ကောင်းသည့် Golden Retriever Border Collie သည်ထူးခြားသောအမြီးနှင့်မြက်ပင်ကိုပျော်မွေ့စေသည်။
Golden Retriever Border Collie ရောစပ်မှုဘယ်လောက်များများရနိုင်မလဲ။
အထီးမကြာခဏ 50 မှ 75 ပေါင်အလေးချိန် (၂၃ မှ ၃၄ ကီလိုဂရမ်) ရှိပြီး ၂၁ လက်မမှ ၂၄ လက်မ (၅၃ မှ ၆၁ စင်တီမီတာ) အမြင့်ရှိသည်။
အမြိုးသမီးမြားသာအနည်းငယ်သေးငယ်ဖြစ်ကြသည် အလေးချိန် ၄၅ မှ ၇၀ ပေါင် (၂၀ မှ ၃၂ ကီလိုဂရမ်) အလေးချိန်ရှိပြီးပခုံးမှာ ၁၉ လက်မမှ ၂၂ လက်မ (၄၈ မှ ၅၆ စင်တီမီတာ) ရှိသည်။
သူတို့ကအဆင်ပြေစွာရှိနေသော်လည်း Border Collie Golden Retriever ရောစပ်ခြင်းသည်သေးငယ်သောအိမ်များသို့မဟုတ်တိုက်ခန်းများတွင်ပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်နိုင်သည်။
သို့သော်ဤဖောက်မှု၏နောက်ခံအခြေအနေကိုသုံးသပ်ခြင်း၊ run ဖို့အခန်းတစ်ခန်းနှင့်အတူအိမ်တအိမ်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ် ။
Golden Border Collies တွင်သူတို့၏မိဘများနှင့်အတူတူပင်ပန်းသောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးများရှိသည်။ တက်ကြွသောတစ်ကိုယ်ရေနှင့်တက်ကြွသောမိသားစုများအတွက်စုံလင်သည်။
နှင့်အတူ အလိုလိုပျော်ရွှင်စိတ်ထား သူတို့သည်သင်၏အိမ်ကိုကလေးများ၊ ကြောင်များသို့မဟုတ်အခြားခွေးများနှင့်မျှဝေရန်ပြnoနာမရှိပါ။ ပိုပျော်ရွှင်လေ! ဤသည်သို့သော်အနည်းငယ်အသိပေးချက်နှင့်အတူပါရှိသည်။
ကျေးဇူးတင်စရာပဲ၊ Golden Retriever Border Collie ရောစပ်မှုသည်မြန်ဆန်သောလေ့လာမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဤအကြောင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤစပ်စပ်သည်aဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်စိတ်ချစွာပြောနိုင်သည် အတွေ့အကြုံမရှိသေးသောနှင့်အတွေ့အကြုံရှိသူနှစ် ဦး စလုံးအတွက်ကောင်းသောရွေးချယ်မှု ။
ရွှေနယ်စပ် retrievers စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများကိုတပ်မက် ပင်အိုမင်းခြင်းသို့။
Golden Border Collie သည်လယ်သမားများ၊ မွေးမြူရေးခြံများ၊ ခွေးလေ့ကျင့်သူများနှင့်အတူထိရောက်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ သင်၏ခွေးတစ်ကောင်လက်ထောက် Gollie ကိုသုံးသပ်ကြည့်ပါ။ သူတို့ကိုမင်းရဲ့ခြေအိတ်တွေကိုခွဲဖို့တောင်သင်ပေးနိုင်တယ်။ ဤအ fluffy ပါရမီအဘို့, မိုsky်းကောင်းကင်ကန့်သတ်ပါတယ်။
Golden Border Retriever သည်အလုပ်မရှိဘဲပိုဆိုးလျှင်၊ အလွန်အမင်းအချိန်အလွန်အမင်းတစ်ယောက်တည်းအချိန်ဖြုန်းနေသည့်အခါသူတို့၏စိတ်ကျန်းမာရေးသည်သင်သိသင့်သည်။
ဝါးခြင်းသို့မဟုတ်တူးခြင်းကဲ့သို့သောအဖျက်စွမ်းအားများဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်။ တနည်းအားဖြင့်သူတို့ကဆုတ်ခွာသွားပြီးသူတို့ရဲ့မီးပွားဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ သင့်ကလေးကရောဂါလက္ခဏာပြနေသည် စိုးရိမ်စိတ်ခွဲခြာ နှင့်ဖြစ်နိုင်သည်စိတ်ကျရောဂါ။
သတိရ, သူတို့ကုမ္ပဏီရုံမလိုအပ် - သူတို့အပြန်အလှန်နှင့်ကွိုးစားအားထုလိုအပ်ပါတယ်။
သူမ၏လိုအပ်ချက်များကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာဖြည့်ဆည်းရန်သင်၏အချိန်ဇယားကိုချိန်ညှိပါ။ သို့မဟုတ်ဒေသခံ doggie daycares သို့မဟုတ် sitters များကိုရှာဖွေပါ။ ၎င်းသည်သင်၏ Golden Retriever & Border Collie လက်ဝါးကပ်တိုင်ကိုသင်၏မရှိခြင်းကိုသတိပြုမိစေသည်။
သငျသညျအဘို့ပြင်ဆင်မရစေခြင်းငှါ, သူတို့ရဲ့လေ့ကျင့်ခန်း regimen ဖြစ်ပါတယ်။ သင်တက်နိုင်မလား?
Meet Toby, ရွှေပြန်လည်ရယူသည့် Border Collie ရောနှောခြင်း - ရုပ်ပုံအရင်းအမြစ်
Gollies hypoallergenic မရှိကြပေ High-shedders ထည့်သွင်းစဉ်းစား ။
သမျှသောဆံပင်နှင့်သွန်းလောင်းနှင့်အတူ, သင်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ် အနည်းဆုံးတစ်ပါတ်နှစ်ကြိမ်သင့်ရဲ့ခွေးကိုတိုက် ။ ပုံမှန်သန့်စင်ဆေးကြောခြင်းသည်သဘာ ၀ အဆီများကိုပြန့်ပွားစေသည်။ သူမအားကျန်းမာသန်စွမ်းစေသည်။
၎င်းသည်အမွေးများလျော့ကျခြင်းနှင့်ရှုပ်ထွေးခြင်းများကိုကာကွယ်ပေးသည်။ ဤကဲ့သို့သောအကျိုးကျေးဇူးများနှင့်အတူ, အခမဲ့ခံစားရသည် ဖြီး ပိုပြီးမကြာခဏသင့်ရဲ့ Coltriever ရဲ့ဆံပင်။
ခွေးများသည်ရက်သတ္တပတ် ၂ ပတ်လျှင်တစ်ကြိမ်ရေချိုးရန်လိုသည်ကိုသင်ကြားကောင်းကြားမိလိမ့်မည်။ ဤသည်အန္တရာယ်ရှိသောဖြီးလိမ်းပုံအမှားများဖြစ်ကြသည် ။
သာ ခေါင်းလျှော်ရည် သူတို့အထူးသဖြင့်ကြမ်းနေသည့်အခါသင်၏ရွှေနယ်စပ် retriever ။ ခွေးဆိတ်ဆိတ်ဆိတ်ဆန့်ကျင်နေတဲ့တိုက်ပွဲကအရမ်းပင်ပန်းလွန်းနေရင်ညှပ်ဖို့ကြိုးစားမယ့်အစားလမ်းလျှောက်သူဆီသွားပါ။
၎င်းသည်သင်၏ Gollie ၏သွားများနှင့်နားများပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်ရန်အချိန်ပိုပေးလိမ့်မည်။
Coltrievers မှအကျိုး နေ့စဉ်သွားစောင့်ရှောက်မှု သွားဖုံးရောဂါကာကွယ်တားဆီးရန်နှင့်ပြား buildup လျှော့ချရန်။ ဖြည့်စွက်နေစဉ်အခြားနေ့တိုင်းလည်းသင်လုပ်နိုင်သည် သွားဖုံး !
သင်၏ Golden Border Retriever ၏နားရွက်များကိုအပတ်စဉ်စစ်ဆေးပါ။ ပိုးမွှားရောဂါလက္ခဏာများကိုသင်သတိပြုမိပါကသင်၏အကောင်းဆုံးကုသမှုလမ်းကြောင်းကိုဆုံးဖြတ်ရန်သင်၏ဗီတာမင်နှင့်ဆက်သွယ်ပါ။
လက်သည်းညှပ် သင့်ရဲ့ခွေးရဲ့ဖြီးလိမ်းပုံလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သင့်ပါတယ်။ တစ်လတစ်ခါကောင်းတဲ့ပန်းတိုင်တစ်ခုပဲ , ဒါပေမယ့်သင်ကသင်၏ pup ရဲ့လိုအပ်ချက်အပေါ်အခြေခံပြီးကြိမ်နှုန်းတိုးမြှင့်သို့မဟုတ်လျှော့ချနိုင်ပါတယ်။
လေ့ကျင့်ခန်း - စွမ်းအင်အချို့အတွက်အဆင်သင့်ပြင်ဆင်ပါ။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုသည်သင်၏ရွှေနယ်စပ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေး၏အဓိကအချက်ဖြစ်သည်။ သူတို့သည် ဦး နှောက်ကိုအလုပ်လုပ်ရန်နှင့်သူတို့၏ခြေထောက်များကိုပုံမှန်ဆန့်ရန်အလွန်လိုအပ်သည်။
များစွာသောကစားခြင်းအစီအစဉ်များကိုစီစဉ်ခြင်း (သို့) ခွေးပေါက်စများကိုတစ်နေ့လုံးလမ်းလျှောက်ခြင်း။ ၎င်းသည်၎င်းတို့အားဆက်လက်ဖွံ့ဖြိုးဆဲအဆစ်များကိုထိခိုက်စေခြင်းမရှိဘဲစွမ်းအင်အချို့ကိုလောင်ကျွမ်းစေသည်။
သူတို့ကြီးထွားလာပြီးကြွက်သားများသန်မာလာသောအခါသင်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နိုင်သည်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူ Golden Border Collie လိုအပ်လိမ့်မည် နေ့စဉ်ကာယလှုပ်ရှားမှုအနည်းဆုံးမိနစ် ၉၀ မှတစ်နာရီ။
ဤ ၂ နာရီခွဲအတွင်းအမြင့်ဆုံးကိုရောက်စေရန်လှုပ်ရှားမှုကိုခွေးတစ်ကောင်အားကစားလို ဦး နှောက်ဂိမ်းများနှင့်ပေါင်းစပ်ပါ။
Golden Border Collies အတွက်လေ့ကျင့်ခန်းသည်သူတို့နှင့်အတူချိတ်ဆက်ရန်နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ သူတို့မှာအသုံးဝင်ဖို့အလိုလိုသိတဲ့မောင်းနှင်မှုရှိတယ်။ တက်ကြွစွာဆက်ဆံပါ၊ သူတို့၏ရည်မှန်းချက်များကိုသင့်အားပိုမိုနီးကပ်စွာအတူတကွဖြစ်စေမည့်လှုပ်ရှားမှုများသို့ပို့ဆောင်ပါ။
Meet Buzz, အပျော်ကစား Golden Border Retriever ရောနှောခြင်း - ရုပ်ပုံအရင်းအမြစ်
Golden Border Retrievers များသည်သွက်လက်ခြင်းနှင့်စုဝေးခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောသတ္တဝါများဖြစ်သည်။ အနီးအနားမှာရှိတဲ့လေ့ကျင့်ရေးအဖွဲ့ကိုရှာဖွေပါ။
ဖြစ်နိုင်သည့်အခါတိုင်းသူတို့၏စွမ်းအင်ကိုလောင်ကျွမ်းစေရန်သင်၏ Golden Border Collie ကိုအိမ်ပြင်တွင်ထားပါ။ သူတို့ကိုစွန့်ပစ်။ စွန့်ခွာ။ ပြေးနိုင်သည့်လုံခြုံသောinရိယာတွင်သူတို့သွားလာရန်အရေးကြီးသည်။
ဤ Crossbreed သည်အပူနှင့်အအေးရာသီဥတုများနှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုမြင့်မားစွာသည်းခံနိုင်သော်လည်း သမရာသီဥတုစံပြဖြစ်ပါတယ် ။
အစားအစာ - ကျန်းမာသောနာမည်အမည်ပေးပါ
ဒီဟိုက်ဘရစ်၏သဘာဝစွမ်းအားပေးထား, သူတို့များသောအားဖြင့်လိုအပ်ပါတယ် 2.5 ခွက်မှ3ခွက်တစ်ရက် ၏ ပရိုတိန်းကြွယ်ဝသောခြောက်သွေ့သောအစားအစာ သူတို့ကိုစောင့်ရှောက်ရန်တက်လောင်စာ။
ခင်ဗျား Gollie ကိုသူမကိုအခြေခံပြီးကျွေးမယ်ဆိုရင် နေ့စဉ်ကယ်လိုရီလိုအပ်ချက်များကို ၎င်းသည်၎င်း၏မိဘများစားသုံးသင့်သောအကွာအဝေးအတွင်းတွင်ဖြစ်လိမ့်မည်။
Border Collies သည် ၇၀၀ မှ ၁၀၀၀ အထိလိုအပ်ပြီး Golden Retrievers များသည်တစ်နေ့လျှင် ၉၈၉ မှ ၁,၂၂၂ ကယ်လိုရီလိုအပ်သည်။
ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောသို့မဟုတ်ပိုမိုတက်ကြွသောရွှေနယ်စပ်ကော်လိပ်များသည်၎င်းတို့၏ဗိုက်ပြည့်စေရန်အတွက် kibble အနည်းငယ်လိုအပ်သည်။ အစာကျွေးခြင်းအစီအစဉ်သည်သင်၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အသက်၊ အရွယ်အစားနှင့်ကျန်းမာရေးအပေါ်တွင်လည်းမူတည်သည်။
ကျေးဇူးတင်စရာပဲ၊ ခွေးတစ်ကောင်ရဲ့ဒီဘောလုံးကအချိန်ကြာမြင့်စွာနေတယ်။ 12 မှ 15 နှစ် ပျမ်းမျှအားဖြင့်! သို့သော်ထိုသို့အထင်ကြီးလောက်ဖွယ်သက်တမ်းနှင့်အတူအချို့သောကျန်းမာရေးအခြေအနေများကသူတို့၏ရုပ်ဆိုးသော ဦး ခေါင်းများကိုနောက်ဆုတ်သွားစေနိုင်သည်။
အသုံးအများဆုံးအချို့ပါဝင်သည် ဓာတ်မတည်, ပူးတွဲကိစ္စများ (ကြိုက်တယ် တင်ပါးဆုံရိုး dysplasia နှင့် patellar ဇိမ်ခံ) နှင့် မျက်စိပြissuesနာများ (PRA နှင့်မျက်စိအတွင်းတိမ်ထင်သည်) နှလုံးအခြေအနေနှင့်ဝက်ရူးပြန်ရောဂါ အဖြစ်ကောင်းစွာတက်ဖြတ်တောက်နိုင်ဘူး။
အထူးသဖြင့် Golden Retrievers များသည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်အလွန်အမင်းခက်ခဲလေ့ရှိသည် ခွေးတစ်ကောင်ကင်ဆာ , ထိုသို့လည်းဤပေါင်းစပ်အလိုတော်ဖြစ်နိုင်ကြောင်းပါပဲ။
ဤရောဂါများကိုတားဆီးရန်သင်၏အကောင်းဆုံးအလောင်းအစားမှာသင်၏ pooch ၏ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးစောင့်ရှောက်မှုအစီအစဉ်ကိုဘာသာရေးအရလိုက်နာရန်ဖြစ်သည်။
ဆိုလိုသည်မှာ heartworm၊ flea နှင့် tick ကာကွယ်မှုနှင့်ကျန်းမာသောအလေးချိန်ကိုဘယ်တော့မျှမပျောက်ပါစေနှင့်။
ရွှေရောင် Border Collie ခွေးကလေးကိုရော
Coltrievers သည်သင်ထင်သည်ထက် ပို၍ တတ်နိုင်သည် ပုံမှန်ကုန်ကျစရိတ်ဖြစ်ပါတယ် $ 300 မှ $ 1500 သို့သော်အများစုသည်ထိုစျေးနှုန်းနှစ်ခုကြားတွင်တစ်နေရာရာသို့ကျလိမ့်မည်။
အမှိုက်သရိုက်များမှအမျိုးသမီးများနှင့်ကလေးငယ်များသည်ဈေးကြီးသောဘက်တွင်ရှိသည်။ သငျသညျနှစ်ကောင်အနည်းငယ်ကိုကယ်တင်ချင်တယ်ဆိုရင် Sheila အစား Sheldon ကိုရွေးချယ်ပါ။ ရည်ညွှန်းသည် ဒီစပ်၏အမှိုက်သရိုက်များသည်အရွယ်အစားမှာခွေးပေါက်စတစ်ကောင်မှ ၄ ကောင်အထိရှိသည် ။
Golden Retriever Border Collie မျိုးဆက်များကိုရောစပ်သည်
ထိပ်တန်းအဆင့်ရှိမျိုးဆက်တစ်မျိုးကိုရှာဖွေခြင်းသည်စိတ်ရှည်ခြင်းအတွက်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ကျိုးနပ်ပါသည်။ အားဖြင့်ရိပ်ရတဲ့ kennels ထွက်ပေါင်းပင် ကျန်းမာရေးအာမခံချက်များတောင်းခံခြင်းနှင့်လူတစ် ဦး ချင်းအလည်အပတ်ခရီးစီစဉ်ခြင်း ။
မျိုးပွားသူများကသူတို့၏ခွေးများနှင့်မည်သို့အပြန်အလှန်အကျိုးပြုသည်ကိုသတိပြုပါ။ ခွေးတွေဘယ်မှာနေတယ်၊ ​​ဘယ်အခြေအနေမျိုးမှာလဲသင်ဂရုစိုက်ချင်တယ်။
ကောက်ကြက်ခြံ (Snohomish, WA)
Greenfield Puppies တွေကိုလည်းစစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီ site ပါရှိပါတယ် Border Collie ရောစပ်သည် နှင့် ရွှေ retriever ရောနှော အမေရိကန်အနှံ့အများအပြားနေရာများတွင်။
သငျသညျစင်ကြယ်သောရွှေ Retriever သို့မဟုတ် Border Collie မျိုးဆက်များမှထွက်ချင်လျှင်, ရှေ့ဆက်သွားပါ။ သင်ရှာနေတာကိုသူတို့ကိုအသိပေးပါ။ သူတို့ကသင့်ကိုရှာတွေ့အောင်ကူညီနိုင်လိမ့်မယ်။
ရွှေ retriever နယ်စပ်ဒေသ Collie ရောနှောချမှတ်ခြင်း
မွေးစားလိုပါသလား သင်ကံကောင်းပါစေ Golden Retriever နှင့် Border Collie ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းများသည်ဘာဂါကွင်းဆက်ကဲ့သို့များပြားလှသည်။
သူတို့ထဲကအတော်များများဟာလည်း hybrids တွေကိုယူကြတဲ့အတွက် Coltriever နဲ့သင်ရှာတွေ့နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းကောင်းတစ်ခုပါ။
သင်သည်မည်သည့်ရွှေနယ်စပ်ကော်ပိုရေးရှင်းတွင်သူတို့ပါဝင်သည်ကိုကြည့်ရန်သင်၏ဒေသဆိုင်ရာလူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်း၏ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်လည်းသင် tabs များကိုထားနိုင်သည်။ ဤအတောအတွင်း၊ သင်၏ရှာဖွေမှုကိုစတင်ရန်ဤနေရာတွင်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့အနည်းငယ်ရှိသည်။
ပင်လယ်ကွေ့ကမ်းရိုးတန်းရွှေ Retriever ကယ်ဆယ်ရေး (Murdock, FL)
Heaven of Golden Retriever ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် Sanctuary, Inc. (Capon တံတား, WV)
လိုအပ်နေတဲ့ Border Collies (San Pedro, CA)
ဒါဟာအစကြည့်ရှုရကျိုးနပ်ပေမည် ထာဝရသူငယ်ချင်းများရွှေရောင်ပြန်လည်ရယူခြင်း ။ ဤကယ်လီဖိုးနီးယားအခြေစိုက်အဖွဲ့အစည်းသည်ရွှေဖြင့်ပြန်လည်ထုတ်ယူသည့်ဒေတာဘေ့စ်တစ်ခုရှိပြီး၎င်းသည်အတော်အတန်အသုံး ၀ င်နိုင်သည်။
အချို့မှာစွမ်းအင်မြင့်မားသောခွေးများဖြစ်ပြီးအချို့မှာမူအလုပ်ကြိုးစားသူဖြစ်သည်။ Lab သို့မဟုတ် Border ရောနှောမှုကိုသေးငယ်သောအိတ်ထဲတွင်ရှာ။ သော်လည်းကောင်း၊
Border Collie ဂျာမန်သိုးထိန်း ရောနှော (AKA Shollie)
Border Collie Labrador ရောနှောပါ (AKA Borador)
Corgi ရွှေ Retriever ရောနှော (AKA Golden Corgi)
Poodle Golden Retriever ရောနှောခြင်း (AKA) ရွှေဝါရောင် )
Sonny, အ Gollie ခွေးကလေးတွေ့ဆုံ ရုပ်ပုံအရင်းအမြစ်
သင့်ရဲ့ Gollie ခွေးကလေးဟာအစကတည်းကစပြီးစွမ်းအင်ပြည့်ဝပြီးဥာဏ်စွမ်းရှိလိမ့်မယ်။ သူတို့ကစိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားသည့်စိတ်ထားရှိသောစိတ်အားထက်သန်သောလူကြီးများအဖြစ်သို့ကြီးပြင်းလာလိမ့်မည်
ဒီပြင်းထန်သောခွေးတစ်ကောင်သည်တက်ကြွ။ လက်ကိုင်ပိုင်ရှင်၏လက်ထဲတွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ 'ပျင်းရိ' ဒီဖောက်ရဲ့ဝေါဟာရထဲမှာမဟုတ်ပါဘူး။
Golden Border Collie နဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်ဘာကိုနှစ်သက်ဆုံးလဲ။ မှတ်ချက်များအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြပါ!
Border Collie Lab Mix - Borador အတွက်နောက်ဆုံးလမ်းညွှန်
Maltese shih tzu ကဘယ်လောက်ကြီးလဲ